Ndị Canada nwere ike tinye akwụkwọ nyocha PCR n'ime ụlọ nkwari akụ na Jamaica n'ọnụego mbelata
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Ndị Canada nwere ike tinye akwụkwọ nyocha PCR n'ime ụlọ nkwari akụ na Jamaica n'ọnụego mbelata
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Nlele tupu ọpụpụ Jamaica maka ndị njem Canada
Ndị Canada na-eme njem na Jamaica ga-erite uru ugbu a site na ọrụ nnwale PCR dị ọnụ ala ma dịkwa ọnụ ala ebe ha na-aga n'ihi mbọ na-agba ọsọ nke Jamaica Tourist Board (JTB). Ndị ọrụ Jamaica esorola ụlọ nyocha abụọ nkeonwe na agwaetiti ahụ iji nye ndị bi na Canada na-alọta ụlọ ohere ịnweta ule PCR n'ime ụlọ nkwari akụ na-enweghị nkwụsị.
Ndị ọbịa Canada na Jamaica agaghị enwe ike ịde akwụkwọ nyocha COVID-19 tupu ọpụpụ na mbelata ọnụ ahịa karịa 50%.
Ndị njem nlegharị anya na-anọ n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ikike na Jamaica's Resilient Corridors na ebe obibi ndị ọzọ akwadoro nwere ike ịhazi ule PCR ka a ga-eme n'ụlọ site na ọrụ concierge.
Ndị na-eme njem ga-enwekwa ike ịdeba ule PCR n'aha ndị ahịa ha tupu oge eruo.
Malite na Mọnde, Ọktoba 25, ndị ọbịa Canada ga-enwe ike ịdebanye akwụkwọ nyocha ihe gbasara COVID-19 tupu ọpụpụ ha chọrọ ozugbo site na. Baywest Wellness Clinic na Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Technology Solutions Limited (TSL) maka $75 USD (gụnyere ụtụ isi), mbelata ihe karịrị 50% kwụsịrị ọnụahịa ule PCR gara aga. Ndị ọbịa ga-ahazi ule ha site na ọnụ ụzọ ụlọ nyocha ọnlaịnụ raara onwe ya nye ka ha wee ruo eru maka ọnụego a pụrụ iche.
Ndị njem nlegharị anya na-anọ n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ikike na Jamaica's Resilient Corridors na ebe obibi ndị ọzọ akwadoro nwere ike ịhazi ule PCR ka a ga-eme na ụlọ site na ọrụ concierge dị mma. Ndị ọbịa na-anọ na Villa nkeonwe, ụlọ ọbịa, ma ọ bụ ebe obibi nwere ike ịdebanye aha n'onwe ya na Baywest ma ọ bụ ụlọ nyocha TSL kacha nso. Ndị na-eme njem ga-enwekwa ike ịdeba ule PCR n'aha ndị ahịa ha tupu oge eruo.
“Nnwale PCR ọhụrụ n'ime ụlọ nkwari akụ na ọnụ ahịa mbelata nke Jamaica ga-abụ ihe na-agbanwe egwuregwu Ndị njem Canada na-eleta ebe a na-aga," Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett. "Mgbalị a bụ ihe kacha ọhụrụ n'ime anyị na-aga n'ihu Jamaica CARES mmemme, ntinye aka zuru oke n'ebe niile iji nye ndị njem niile ahụmịhe nchekwa na enweghị nkebi mgbe ha na-eleta agwaetiti anyị mara mma. "
"Oge mgbụsị akwụkwọ na oge oyi na-abịa dị oke mkpa maka mpaghara njem nlegharị anya Jamaica, JTB na-enwekwa obi ụtọ na ha kwurịtara nhọrọ nnwale COVID-19 ka mma maka ndị njem Canada n'agwaetiti," Donovan White, onye isi njem nlegharị anya, Jamaica kwuru. "Ndị mmekọ anyị niile na Jamaica na Canada nwere ekele dị ukwuu na ndị ọbịa na ebe a ga-enweta ule PCR ọkaibe na ntụsara ahụ nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ ha n'ọnụego dị oke ọnụ."
Ndị Canada na-aga Jamaica nwere ike denye ule PCR n'ịntanetị tupu ha apụ ma ọ bụ mgbe ha na-aga site na nyiwe ntinye akwụkwọ abụọ a raara nye:
Ngwa ntanetị na-ejide ozi niile dị mkpa iji banye Canada ọzọ, gụnyere ụbọchị njem na ebe ule ahụ. A ga-ahazi ịkwụ ụgwọ maka ọrụ ahụ n'ịntanetị n'oge ntinye akwụkwọ site na kaadị kredit. A ga-eziga nsonaazụ ule sitere na Baywest na TSL ozugbo na ndị ahịa 24- ruo 48-awaátị na-esochi nchịkọta nlele.
"JTB na-agbasi mbọ ike ijikọ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ mba ahụ enwetara ikike iji mee ka ndị ọbịa Canada nwee ike ịnweta ule na ọnụ ala," Angella Bennett, Onye isi mpaghara Canada, Jamaica Tourist Board kwuru. "Obi dị anyị ezigbo ụtọ iweta ọrụ a na-echere ogologo oge n'ahịa ma mee ka njem na Jamaica bụrụ nke na-enweghị ntụpọ maka ndị Canada n'oge oyi a."
Dịka ntuziaka njem nlọghachi nke Canada dị ugbu a, ndị njem niile gbara afọ ise gbagoro n'agbanyeghị ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ga-enyerịrị ihe akaebe nke nsonaazụ nnwale molekul na-adịghị mma nke COVID-19 ịbanye na obodo ahụ. A ga-emerịrị ule ziri ezi n'ime awa 72 nke oge ọpụpụ ụgbọ elu ha haziri.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara ụkpụrụ ntinye na ọrụ nnwale nke Jamaica ugbu a maka ndị njem Canada, pịa ebe a.